China Soft PVC Key Amakhava ifektri abakhiqizi | SJJ
Ikhava yokhiye weSoft PVC ibuye ibize njengekepisi yokhiye, into enhle yokuphromotha ayikwazi ukuhlobisa ukhiye wakho kuphela, kepha futhi iphakamisa ibhizinisi lakho noma inhlangano.
Ithambile Ikhava Yokhiye we-PVCyizinto ezinhle ukuvikela okhiye bakho nokukhombisa izinhlobo zakho kanye nokukhethekile. Izembozo zokhiye ezithambile ze-PVC zenziwe ngezinto ezithambile ze-PVC, ngokubumba okushaywe ngokufa ukuze kutholakale ubujamo namalogo ahlukile. Okhiye bakho beminyango, izimoto, amacala njll. Okwenziwe ngezinto zensimbi kungaba lula ukuthi kwenziwe i-oxidized, ukubeka iSoftIkhava Yokhiye we-PVCingavikela futhi ivikele okhiye ukuze benziwe i-oxidized, lokhu kugcina izinkinobho zintsha futhi zikhanya. Ukubeka okunye okunamathiselwe njengezibani ezinebhethri ngaphakathi kwengxenye ethambile ye-PVC kungasetshenziswa njengethoshi. Imiklamo ehlukene yamakhava angukhiye ingakhombisa isici sakho esihle, ukubonisa imikhiqizo yakho ngokukhethekile. Usayizi omncane wezembozo zeSoft PVC Key kulula ukugcina noma ukuletha noma yikuphi. Indaba inobuhlobo futhi ayinabuthi emvelweni, ingadlula e-United States noma kumazinga wokuhlola wase-Europe. Yonke imibala ye-PMS iyatholakala, imibala eminingi ingatholakala entweni efanayo. Imininingwane ingakhonjiswa ngokuya ngemiklamo yakho.
Izinketho Zokunamathisela Okuvamile: Indandatho yejump, iringi yokhiye, izixhumanisi zensimbi, izintambo, amaketanga ebhola, amalambu, ibhethri nokunye.
Langaphambilini Izikhiye Ezikhiyekile ze-PVC
Olandelayo: I-Soft PVC Bottle Openers
ikesi lekhava yokhiye
amakhava ayisihluthulelo ayathengiswa
Ikhava Yokhiye we-PVC
amakhava okhiye wenjoloba